Izindaba - Amaphuzu amane okufanele anakwe ekulungisweni nasekugcinweni kwebhola le-groove ejulile
Amaphuzu amane okufanele anakwe ekulungisweni nasekugcinweni kokuthwala okujulile kwebhola
Okokuqala, gcina ukuthwala nendawo ezungezile ihlanzekile
Angidingi ukukutshela ukuthi kwenzekani. Noma uthuli olungabonakali lungena ekuthwaleni kwe-HGF, luzogqoka ukuthwala. Ukukubeka ngokusobala, awukwazi ukugcoba noma yisiphi isihlabathi emehlweni akho, okuyiqiniso!
Okwesibili, ukusetshenziswa kokufakwa kufanele kwenziwe ngokucophelela nangokunembile
Ngeke size sibe nomqondo omncane ovamile, uma kungenjalo, ungazenzi amabombo we-groove ball, uye ekhaya ukuyodlala, into ebaluleke kakhulu ukungavumeli ukugxishwa okuqinile, kungavunyelwe ukushaya ngqo ngesando, ayikwesabi ukuphuka, uphukile ukusonteka, ukuthi ungenza kanjani, uthwale ukulahlekelwa kwabo, ha ha, futhi akuvunyelwe ukudlulisa ingcindezi emzimbeni.
Okwesithathu, sebenzisa amathuluzi wokufaka afanele futhi anembile
Zama ukusebenzisa amathuluzi akhethekile bese uzama ukugwema ukusebenzisa indwangu kanye nefayibha eyisisekelo.
Okwesine, ukuvimbela ukugqwala okuthwele, ungasebenzisi amabhamuza
Ukuthwala kwe-Qyzc kwenziwa ngensimbi enhle, kepha futhi kuyesaba amanzi. Uma ungakukholwa, cwilisa emanzini, ha ha, lapho uphatha ngesandla, kufanele ugeze umjuluko ezandleni zakho, bese uwugcoba ngoyili osezingeni eliphezulu wamaminerali ngaphambi kokuhlinzwa. Ngenkathi yezimvula nasehlobo, naka ngokukhethekile ukuvimbela ukugqwala. Ungangitsheli ukuthi yini okufanele wesabe ukugqwala. KULUNGILE, zizame wena bese ubona ukuthi uyoba yini umphumela wokugqwala!
Kuyasebenza ukuphenya uwoyela nokugcoba uwoyela osetshenziswayo ukuqonda isimo sokusebenza kokuthwala kwe-qyzc. Vele, ukuvuza, ukushintsha kombala nokonakala kukawoyela noma uwoyela kungahlulelwa kumswakama, ukungcola, impuphu yensimbi, njll.
Kucatshangelwa ukuthi uma kukhona ukuvuza kokuthambisa kanye nezindaba zangaphandle ezifana ne-iron powder nensimbi eyimpuphu exutshwe, inani lokuvuza, izinga lokushisa nokudlidliza kwe-groove ball bearing ethambile kuzobonwa njalo. Uma kukhona okungajwayelekile, kuzolungiswa ngaphambi kwesikhathi.